लिबर अफिस 3.4.3..XNUMX..XNUMX डाउनलोडका लागि उपलब्ध लिनक्सबाट
लिबर अफिस 3.4.3..XNUMX.। डाउनलोडका लागि उपलब्ध छन्
मलाई अझै पनि याद आउँछ त्यो हंगामा जुन शुरू भयो बजेट अधिग्रहण SUN र यस पछि, गर्न OpenOffice। त्यतिखेर त्यहाँ यस अफिस सुइटको भविष्यका बारे धेरै अफवाहहरू थिए जुन कि धेरैको धारणा अनुसार बेपत्ता पारिएको थियो।
यो शुरू भएको धेरै लामो समय थिएन LibreOffice, काँटा OpenOffice जुन अहिलेसम्म संसारको सबैभन्दा लोकप्रिय अफिस सुइट हो जीएनयू / लिनक्स। यसको पहिलो सुरुवात भएदेखि, यस अनुप्रयोगको विकास स्थिर रहेको छ र यो जति बढि बढ्दै जान्छ, अधिक खबर हामी यसमा पाउन सक्दछौं।
यो समय, दस्तावेज फाउन्डेशन को तेस्रो मर्मत संस्करण जारी गर्‍यो LibreOffice 3.4को लागी संस्करण संग लिनक्स, Windows y म्याक, 32 र 64 बिट्स को लागी यसको भेरियन्टमा। यो संस्करण अधिक स्थिर र केही निश्चित गर्न को प्रतिज्ञा गर्दछ त्रुटिहरू en लेखक, छाप्नुहोस्, क्याल्क, एसडिके र पुस्तकालयहरु LibreOffice.
सामान्य रूपमा, यसले धेरै सुधारहरू पनि समावेश गर्दछ, जस्तै: साधारण शीर्षक र पृष्ठ संख्या, सेलहरूको साथ काम गर्ने एर्गोनोमिक्समा सुधार, आयातको लागि समर्थन पीडीएफ, स्लाइड शो प्रस्तुतीकरण कन्सोल, काम गर्ने क्षमता र फाईलहरू आयात गर्नुहोस् SVG, राम्रो रिपोर्ट जनरेटर र विस्तारहरूको लागि समर्थन, केहि अन्यहरूमा तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ यो लिङ्क.
LibreOffice 3.4 थपियो धेरै परिवर्तन ईन्टरफेस र अफिस सुइटको अपरेसनमा र व्यक्तिगत रूपमा मलाई आशा छ कि संस्करण for को लागि तिनीहरूले हामीलाई आमूल परिवर्तनहरू गर्नेछन्।
हामी तलका लिंकबाट फाईलहरू डाउनलोड गर्न सक्छौं:
लिबर अफिस 3.4..XNUMX डाउनलोड गर्नुहोस्
लेखको पूर्ण मार्ग: लिनक्सबाट » aPLICACIONES » लिबर अफिस 3.4.3..XNUMX.। डाउनलोडका लागि उपलब्ध छन्
इरविन मैन्युएल बूम गेमेज भन्यो
तर त्यहाँ अद्यावधिक वा स्थापना गर्नमा कुनै समस्या हुनेछैन?
इरविन मानुएल बूम गेमेजलाई जवाफ दिनुहोस्
त्यहाँ कुनै समस्या हुनुपर्दैन, तपाईंको डिस्ट्रो तपाईंले पहिले नै लिब्रे अफिसको यो संस्करण हुनुपर्दछ, तपाईं कुन डिस्ट्रो प्रयोग गर्नुहुन्छ?
GNU / Linux मा ब्राउजरहरू कुन छनौट गर्ने?
डल्फिनको लागि कुञ्जीपाटी सर्टकटहरू